गुल्मीका कुन उम्मेदवारले कुन मतदान केन्द्रबाट भोट हाल्दै छन्? – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/गुल्मीका कुन उम्मेदवारले कुन मतदान केन्द्रबाट भोट हाल्दै छन्?
गुल्मीका कुन उम्मेदवारले कुन मतदान केन्द्रबाट भोट हाल्दै छन्?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर २०, बुधबार १६:२४ मा प्रकाशित
गुल्मी, मंसिर २० । बिहिवार हुँने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गुल्मीका उम्मेदरवारहरुले छुट्टा छुट्टै स्थानबाट मतदान गर्दै छन् । प्रतिनिधी सभा उम्मेदवार मध्ये क्षेत्र नं. १ मा एमाले सचिव बाम गठबन्ध उम्मेदवार प्रदिप ज्ञवालीले रुरु गाउँपालिका अन्र्तगत चौतरा निमाबि बंघा मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने भएका छन् ।
काँग्रेसका उम्मेदवार शालिक पन्थीले रेसुङ्गा नगरपालिका महेन्द्रमाबि तम्घासबाट गर्दैछन् । त्यस्तै प्रदेश सभा २ का बामगठबन्धन उम्मेदवार दिनेश पन्थीले धुर्कोट मदाने गाउँपालिकाको दिपक माबि भनभने मतदान केन्द्रबाट मतदान दिँदै छन् ।